Ketrika sy kandra : Nellie Anjaratiana à la conquête du palmarès Miss Madagascar 2020 - Studio Sifaka - Actu, musique, conseils et débats pour les jeunes à Madagascar
Nellie Anjaratiana, élue Miss Diaspora Malagasy 2020.
Originaire de Port-Bergé, Nellie Anjaratiana a quitté Madagascar pour s’installer en France à l’âge de 6 ans. En octobre 2019 à Paris, elle est élue Miss Diaspora Malagasy 2020. Aujourd’hui, à 23 ans, elle est de retour à Mahajanga avec un objectif : devenir Miss Madagascar 2020. Découvrez son parcours, son expérience et son attachement à Madagascar.
Teraka tany Port-Bergé Nellie Anjaratiana ary lasa nifindra fonenana tany France teo amin’ny faha enintaonany. Tany izy no nipetraka sy nianatra ary lany Miss Diaspora Malagasy tamin’ny oktobra 2019. Mandalo eto Madagasikara izy amin’izao fotoana izao, any Mahajanga. Handray anjara amin’ny fifaninanana Miss Madagascar 2020 mantsy i Nellie ary eto no hanomanany sy hiatrehany izany. Resadresaka natao taminy momban’ny traikefa azony, ny fikasany sy ny fifandraisany amin’ny Madagasikara.
Studio Sifaka · 2020 - 06 - 02 Fandaharana Ketrika Sy Kandra -MISS - DIASPORA-